Meizu Mix, nke mbụ Meizu smartwatch dị ugbu a | Akụkọ akụrụngwa
Ruo ọtụtụ ụbọchị, anyị na-anụ akụkọ na asịrị banyere smartwatch ọhụrụ na ahịa, ngwaọrụ nke ụlọ ọrụ China Meizu ga-ekepụta. Nke a smartwatch ga-asọmpi ndị ọzọ mara amara dịka Apple Watch, mana ihe ijuanya na ọ gaghị enwe Android Wear.
Emeputara Meizu smartwatch ọhụrụ, ịbụ Meizu Gbanwee aha gị na igosipụta ihe dị iche iche dịka enweghị Wear Android ma ọ bụ sistemụ arụmọrụ ọ bụla maka elele anya, ọ bụ ezie na ọrụ smart ka na-ejigide ya.
Meizu Mix ga-egosipụta igwe nkịtị na ọdịdị elekere mgbaaka ọdịnala, mana o nwere ihe ngwaọrụ dị mma dị ka ihe mmetụta na bluetooth nke ga - ekwe ka ama anyị jikọọ na Meizu Mix iji nakọta ma ọ bụ kuzi data.
Meizu Mix ga-enwe igwe elekere mgbaaka nke ọdịnala
N'okwu a, Meizu Mix agaghị enwe ihuenyo LCD dị ka ọtụtụ smartwatches, mana ọ ga-enwe ọrụ yiri nke ahụ na Xiaomi Mi Band dị ka ịma jijiji mgbe anyị natara ọkwa ma ọ bụ mee akara ngosi. A ga-anakọkwa data dị ka keystrokes ma ọ bụ ọnụọgụ nke usoro onye ọrụ na-arụ. Meizu Mix gụnyere batrị 270 mAh batrị nke were na ngwaọrụ ahụ nwere nnwere onwe nke karịrị ụbọchị 240.
A ga-ekesa Meizu Mix na agba abụọ, oji na ọcha, nke a ga-ejikọ ya na eriri dị iche iche, naịlọn, akpụkpọ anụ, nchara, wdg ... Nke ga-eme ka ọnụahịa Meizu Mix smartwatch dịgasị iche dabere n'ihe ndị ị nwere. Versiondị kachasị mkpa ga-efu euro 133 na ụdị kachasị dị elu ga-efu euro 200. Meizu Mix bụ ngwaọrụ na-adọrọ mmasị mana ọ bụghị ihe na - enweghị ike iji dochie anya elekere ọdịnala yana Xiaomi Mi Band 2, ha niile na - eche ọnụahịa dị ala karịa Meizu Mix, agbanyeghị na ọ bụghị otu. Ọhụrụ smartwatch Meizu ga-amalite ikesa ya na mbido Ọktọba, ya mere, anyị ga-echere obere oge ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịnweta smartwatch a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » Meizu Mix, nke mbụ Meizu smartwatch dị ugbu a